Novena nke ego ekeresimesi, njikọ ndi otu | Njem zuru oke
Ego ekeresimesi novena, ndi otu ezinulo
La Strenna Novena Ọ bụ otu n'ime Omenala Krismas dịkarịsịrị mkpa na mgbọrọgwụ ike Colombia. Ọ bụkwa ihe ama ama na mba ndị ọzọ dị na South America, dịka Venezuela ma ọ bụ Ecuador. Mkpa ya gafere naanị ihe omume okpukpe, na-aghọ omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya na emume a kara aka maka njikọ nke ezinụlọ.
N'oge Advent, ruo ụbọchị itoolu (site na Disemba 16 ruo 24, gụnyere), ezinụlọ sitere na mba niile na-ezukọta na-ekpe ekpere ọnụ ma na-abụ abụ Christmas carols. Ebe a na-anọ amụ ihe bụ ihe ngosipụta nke Ọmụmụ Jizọs ma ọ bụ Ebe A Na-amụ Amụ, nke dị n’ebe etiti ụlọ. Okwu a "nke itoolu" na-erite site na ụbọchị itoolu ahụ. Mmetụta bụ mbido ekeresimesi.
1 Mmalite nke Aguinaldos novena
2 Na-ekpe ekpere Novena
Mmalite nke Aguinaldos novena
A mụrụ ọmarịcha ọdịnala Katọlik a na ala ndị America, n'oge ọchịchị. Ọ bụ n'ezie Ọkpụkpụ Fernando de Jesús Larrea, Okpukpe Franciscan nke a mụrụ na Quito, onye ga-ebute omume a. Ihe a malitere na 1725, mgbe echichi ya dị ka onye nchụàjà. Ebumnuche nke ikpe ekpere n’akụkụ Ọmụmụ nke Nwa Nwatakịrị Jesus n’ime ụbọchị itoolu tupu ekeresimesi nwere nnukwu nnabata n’etiti ndị na-efe ya
Agbanyeghị, otu ezinụlọ ji eme emume Aguinaldos Novena na Colombia bụ maka mgbanwe ndị nne Maria Ignacia, na njedebe nke narị afọ XIX. Ọ bụ ya nyere ụdị ekpere a, gbakwunye ọysụ, nke a na-akpọ abụ ndị agbakọrọ n'etiti ekpere na ekpere.
Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị otu ụdị nke Novena de Aguinaldos dị ndụ ruo taa, mana ọtụtụ. Arefọdụ ka a na-agụghachi n'asụsụ Spanish ochie, dịtụ ochie ma ka ọ dị ntakịrị ugbu a, na-eji, dịka ọmụmaatụ, ụdị nsọpụrụ "vos". Ndị ọzọ, agbanyeghị, a gbanwere ihe iji meziwanye ahịrịokwu a n'asụsụ nke oge a.
Nke a mara mma video A chịkọtara ihe ekpere nke Novena de Aguinaldos na obodo Colombia:
Dịka ị pụrụ ịhụ, maka ndị Colombia, Novena de Aguinaldos abụghị naanị ọdịnala okpukpe, kamakwa ọ bụ ihe kpatara iji mee ka nkekọ dị n'etiti ndị enyi na ezinụlọ sikwuo ike. Na Christmas gastronomy na egwu ha anaghịkwa ahapụ nhọpụta a.
Na-ekpe ekpere Novena
N'agbanyeghị ụda enweghị nchegharị ya na agwa ọ maara nke ọma, Novena de Aguinaldos Ọ bụ emume na-eso usoro iwu na ụkpụrụ akọwapụtara nke ọma. Ọ na-ebido na Disemba 16 wee na-akwụsị n’uhuruchi Krismas. N’ụlọ ụfọdụ, a na-ekpe ekpere ahụ tupu nri abalị, ebe ndị ọzọ a na-ekpe ya n’azụ.
A na-eme Novena nke Strenna dị ka ezinụlọ
Ebumnuche dị n'ememe a bụ ncheta ọnwa ndị gara aga tupu ọmụmụ Jizọs, oge nke na-agwụsị na ọmụmụ ya na Betlehem. Mama María Ignacia, onye doziri uzo esi ekpe ekpere novenas, guzobere usoro nke ahịrịokwu dị ka ndị a:
Nke mbụ Ekpere maka ubochi niile, jiri ikwesị ntụkwasị obi soro ihe odide mbụ nke Fray Fernando de Jesús Larrea. Mgbe agụchara akwụkwọ a, "Otuto diri Nna".
Ọ na-soro mgbe e mesịrị na echiche nke ụbọchị. Otu nwere nke ọ bụla n’ime ụbọchị itoolu ahụ.
La ekpere ka Nwanyị Na-amaghị Ama abịa na-esote, na-esote ekpere nke itoolu Hail Marys (otu maka novenas ọ bụla).
Mgbe ahụ, ọ bụ oge nke ekpere Saint Joseph, nke a na-agụ kwa ụbọchị. Ihe ogugu a mechiri site n’ekpere ato: “Nna anyi”, “Ekele Maria” na “Otito diri Nna”
na Ọ Joụ ma ọ bụ Ọchịchọ maka ọbịbịa nke Nwa Jesus mekwaa ndu novena. Olu na-agụ abụ ndị a na-agụkarị ndị ukwe.
Mgbe nke a-abịa ekpere Nwa Jesus, nke bu uzo bu isi nke itoolu. Mgbe ọ nwụsịrị, ndị sonyere ya na-ewepụta ohere iji mepụta arịrịọ ha nye nwa ọhụrụ Jizọs, na-achọkarị ahụike na ọganihu maka ụlọ na ezinụlọ.
Itoolu mechiri na ikpeazụ ahịrịokwu, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Nna anyị na Otuto nye Nna anyị.
Ekwesịrị ikpe ekpere na abụ ndị a n'otu n'otu n'ime ụbọchị itoolu. Dị ka ihe atụ nke ihe a kọwara n'elu, nke a bụ ederede mbụ nke Fray Fernando de Jesús Larrea dere nke ọ bụla n'ime nnọkọ nke Novena de Aguinaldos malitere:
«Kacha mma benign Chineke nke enweghi ngwụcha ọrụ ebere, onye hụrụ ndị mmadụ n'anya, na i nyere ha na nwa gị ihe kasị mma nkwa nke ịhụnanya gị nke mere, mere mmadụ n'ime akpa nwa nke a Virgin, a ga-amụ ya n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri maka ahụike na ọgwụgwọ anyị. . Mụ, n’aha mmadụ nile, na-enye gị ekele na-enweghị ngwụcha maka ụdị uru nke onye nwe ala ọzọ; na nloghachi nye ya a na m enye gị ịda ogbenye, ịdị umeala n'obi na omume ọma ndị ọzọ nke nwa gị nwoke dara n'ala, na-arịọ gị maka isi ọma ya nke Chineke, maka ahụ erughị ala nke amụrụ ya, yana maka anya mmiri anya mmiri nke ọ wụsịrị n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri i jiri obi di ala wepu obi anyi, ihunanya di oku, nleda anya nke ihe nile nke uwa, ka nwa amuru ohuru Jisos we nwee ebe aka ya biri, wee biri ebighi ebi. Amen ".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ego ekeresimesi novena, ndi otu ezinulo
Medusa, onye ji agwọ n’isi
Kamel, usoro dị irè nke njem